EYL: Doomo Kallumeysi Sharci Darro Ah Oo La Qabtey – Goobjoog News
EYL: Doomo Kallumeysi Sharci Darro Ah Oo La Qabtey
Doomo si sharci darro ah uga Kallumeysta biyaha Soomaaliya gaar ahaan degmada Eyl ee Gobolka Nugaalk ayaa la sheegayaa in ay sii kordhayaan.
Maamulka degmada eyl ayaa sheegay inay si xawli ah maalmihii la soo dhaafay loogu arkay degaanka doomo badan oo kalumeysato ah oo dhibaato u geysanaya kheyraadka badda Soomaaliya, iyadoo hadda ay soconayaan sida uu sheegay hawlgalo la gula dagalamayo kallumeysiga sharci darrada ah.
Gudoomiyaha Degmada Eyle ee Gobolka Nugaal Muuse Cusmaan ayaa sheegay inay dhawaceeen labo ka mid shaqalaha oo mid ka mid ah uu yahay ajnabi isagoo sheegay inay gacanta ku hayaan labo dooni iyo shaqaalihi sarnaa kadib markii weerar ciidamada ilaalada badda ee maamulka Puntland ay ku qadeen doomahaasi.
Muuse Cusmaan, waxaa uu tilmamay in ay iska caabin kala kulmeen koox hubeesan oo la socotay doomahasi balse ay ka guleesteen sida uu u sheegay Goobjoog News.
waxaa kale uu xusay inay si wadayaan la dagaalanka doomaha iyo marakibta sida sharci darrada ah uga kalumeysnaaya xeebaha Soomaaliya gaar ahaan dhinaca degaanada maamulka Puntland.
Akhriso War Murtiyeedka Shirka Hiigsiga ee Istanbul oo Dhameystiran
instead date [url=https://drbryanpwalsh.com/#]buy cheap gene...
cialis one a day cost [url=https://canadian-drugrbnl.com/#]c...
web cam girls [url=https://camgirls1.com]camgirls1.com[/url]...
abroad smell [url=http://viacheapusa.com/#]viagra 100mg[/url...